Zim A to play in Africa Premier League - NewsDay Zimbabwe
HomeSportCricketZim A to play in Africa Premier League
Zim A to play in Africa Premier League
The Zimbabwe A cricket team will from next year receive more game time when they participate in the inaugural Africa Premier League.
The new continental showpiece is the brainchild of Kenyan Cassim Suliman, the chief executive officer of the Africa Cricket Association.
The Africa Premier League is scheduled to have its first edition in April next year involving South Africa A, Zimbabwe A, Kenya, Uganda, Namibia, Tanzania, Zambia and there is also a possibility of a combined West African team.
Although Zimbabwean cricket standards are way above some of the African nations, the tournament will play a big part in preparing upcoming young players for the international stage.
The latest tournament will be a huge boost to Zimbabwe’s efforts in building a bigger player base in preparation for a return to Test cricket.
Prior to this initiative, the Africa Cricket Association was the only International Cricket Council’s development region not to have its own biennial tournament for non-Test nations.
Previous articleMimosa battle Border Strikers
Next articleChina funding bid to buy Liverpool FC